Faahfaahinta Diyaarad Ay Leeyihiin Ciidamada Kenya Oo Ku Burburtay Somaliya - Jigjiga Online
HomeSomalidaFaahfaahinta Diyaarad Ay Leeyihiin Ciidamada Kenya Oo Ku Burburtay Somaliya
Faahfaahinta Diyaarad Ay Leeyihiin Ciidamada Kenya Oo Ku Burburtay Somaliya
Muqdisho (JO) – Warrarka laga helayo deegaanka Dhoobley ee degmada Afdmadow ee gobolka Jubada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya inay burburtay diyaarad ay lahaayeen ciidamada difaaca Kenya ee qaybta ka ah hawlgalka midowga afrika ee Soomaaliya.
Diyaaradda oo ka kacday xalay garoonka ayaa daqiiqado uun kadib ku dhacday meel aan ka fogeyn isla garoonka.
Burburka diyaaradda oo aan la ogeyn sababta keentay ayaa sababay dhaawacyo soo gaaray duuliyayaashii iyo qaar kamid ah askarta Kenya ee diyaaradda la socday, sida ay sheegeen ilo ku dhaw dhaw maamulka degmada iyo garoonka diyaaradaha.
Afahayeenka AMISOM Colonel Charles Okongo Imbiakha ayaa beeniyay in dhaawacyo halis ay ka dhasheen shilka diyaaradda isla markaana askar saarneyd diyaaradda ay qaarkood dhaawacyo fudud soo gaareen.
Wuxuu sheegay in haatan ay socdaan baaritaanno ku aadan waxa sababay shilkaas.
“Diyaaraddan waxay ku gudo jirtay howlaheedii caadiga ahaa, waxay waraaqo geyneysay magaalada Dhoobley, markii ay Kenya kusoo laaban laheyd oo ay garoonka kasoo duuleysay ayay cilad ku timid waxayna ku dhacday meel garoonka magaalada, 10-kii askari ee saarnaa diyaaradda ayaa dhammaantood badqaba qaarkood waxaa soo gaaray dhaawacyo fudud waana la daweeyay, xaaladdadooduna wey fiican tahay” ayuu yiri Colonel Charles Okongo Imbiakha.
“Waxaa Dhoobley ku sugan koox ka socota ciidammada difaaca Kenya ee KDF kuwaa oo isku dayaya inay ogaadaan waxa sababay in diyaaradda ay burburto”
LAYAAB: “Ninkeeda oo hinaasay ayaa sanka ka gooyay”
Teddy Afro Oo Qaaday Hees Uu Kaga Hadlayo Muranka Biyaha Webiga Nile (GERD)